दूरसञ्चार सेवा १ करोड ३५ लाखमा | गृहपृष्ठ
Home दूरसञ्चार सेवा १ करोड ३५ लाखमा
दूरसञ्चार सेवा १ करोड ३५ लाखमा
असोज २५, काठमाडौं (अस)। देशमा दूरसञ्चार प्रयोगकर्ता १ करोड ३५ लाख १३ हजार ६ सय ७४ पुगेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन (एमआईएस रिपोर्ट) अनुसार साउन मसान्तसम्म नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ४७ दशमलव २७ प्रतिशतमा दूरसञ्चार सेवा पुगेको छ । यसमा मोबाइल प्रयोगकर्ता ४१ दशमलव ७० प्रतिशत छन् ।
असारसम्म देशमा १ करोड ३१ लाख ६३ हजार ६ सय ४० दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्ता थिए । साउनमा असारमा भन्दा दूरसञ्चार प्रयोगकर्ता करीब ३ लाख ५० ले बढेका छन् । केही महीनायता नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्ता प्रत्येक महीना करीब ४ लाखको हारहारीमा बढिरहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ ।
त्यस्तै साउनमा इण्टरनेट प्रयोगकर्ता ३२ लाख ७६ हजार ७ सय ९८ पुगेका छन् । असारसम्म देशमा इण्टरनेट प्रयोगकर्ता ३१ लाख ११ हजार ८ सय ५८ थिए । इण्टरनेटका सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता जीपीआरएसका छन् । साउनसम्म जीपीआरएस इण्टरनेट प्रयोगकर्ता २९ लाख ९१ हजार ४ सय ११ जना छन् । मोबाइलमा जीपीआरएसमार्फत इण्टरनेट चलाउन सकिने भएकाले यसका उपभोक्ता निरन्तर बढिरहेका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार साउनसम्म देशको कुल जनसङ्ख्याको ११ दशमलव ४६ प्रतिशतमा इण्टरनेट सेवा पुगेको छ ।
१७ जनालाई होण्डा सीबीआर
पहिलो चरणअन्तर्गत बुकिङ भएका ‘होण्डा सीबीआर २५०-आर’ मोटरसाइल ग्राहकलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । गत अगष्ट ९ देखि बुकिङ भएका ४५ मध्ये १७ मोटरसाइकल बुधवार प्रदान गरिएको हो । सञ्चारकर्मी सुरज सिंह ठकुरी र नेपालका लागि होण्डाको अधिकृत विक्रेता स्याकार ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिका निर्देशक सुहृद ज्योतिले ग्राहकलाई साँचो हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
उक्त अवसरमा स्याकारका प्रबन्ध निर्देशक सौरभ ज्योतिले ‘होण्डा सीबीआर २५०(आर’ मोटरसाइकल सुरक्षित, आकर्षण र माइलेजको हिसाबले उत्कृष्ट भएको दाबी गरे । ६ गियर भएको सीबीआरले प्रतिलिटर २७ किलोमिटर माइलेज दिन्छ । त्यस्तै, यसमा ‘स्टील डायमण्ड फ्रेम’, ‘हाइड्रोलिक फोर्क प|mण्ट सस्पेशन’, विशेष किसिमको टायर र रिम्स पनि रहेको उनले बताए । यस्ता गुणले सवारीको नियन्त्रण गर्न सहज हुनुका साथै आनन्दसमेत प्राप्त हुने उनको
१३ लिटर इन्धन क्षमताको ट्याङ्की रहेको होण्डा सीबीआर २५०-आर रातो, कालो र खैरो गरी तीन रङमा उपलब्ध छ । नेपाली बजारमा उपलब्ध सीबीआर २५०(आर मोटरसाइकलमा स्ट्याण्डर्ड मोडलको रू. ४ लाख ४९ हजार र सी-एबीएस मोडलको मूल्य ५ लाख १४ हजार ९ सय कायम गरिएको स्याकार कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
चाँगुनारायण जीर्णोद्धारमा अमेरिकी सहयोग
भक्तपुरस्थित चाँगुनारायणको चौघेरा सत्तल अमेरिकी राजदूत सांस्कृतिक संरक्षण कोषको सहयोगमा जीर्णोद्धार हुने भएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चाँगुनारायण वरपर रहेका भवनहरूको जीर्णोद्धारका लागि कोषले रू. ७१ लाख खर्च गर्ने भएको हो ।
लिभिङ ट्रेडिशन्स म्युजियममार्फत गरिने उक्त परियोजनाअन्तर्गत मन्दिर परिसरमा रहेका अधिकांश भवनको जीर्णोद्धार गरिने जानकारी दिइएको छ । जीर्णोद्धारपछि लिभिङ ट्रेडिशन्सले उक्त क्षेत्रमा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने योजना बनाएको कोषले जानकारी दिएको छ । यस परियोजनाले नेपालको वास्तुकलात्मक भवनहरूको संरक्षण गर्नुका साथै परम्परागत कलाको प्रदर्शन गर्ने बताएको छ ।
विगत ९ वर्षमा अमेरिकी सरकारले नेपालभरका ११ सांस्कृतिक स्थलको जीर्णोद्धार र संरक्षणका निम्ति करीब १० करोड ७६ लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ । अमेरिकी राजदूत सांस्कृतिक संरक्षण कोषमार्फत काठमाडौं दरबार स्क्वायरभित्र पर्ने कालभैरव, कागेश्वर मन्दिर, ललितपुरस्थित नागबहालहिटी, उपल्लो मुस्ताङका प्राचीन बौद्ध गुम्बा, ललितपुरको पाटन दरबार स्क्वायर र सोलुखुम्बुको पाङबोचेस्थित प्राचीन गुम्बाको जीर्णोद्धारका लागि उक्त रकम सहयोग गरिएको बताइएको छ ।
दशैंपछि च्याङ्ग्राको भाउ घटयो
असोज २५, पर्वत (अस) । दशैंतिहारलाई लक्षित गरेर हिमाली जिल्ला मुस्ताङबाट पर्वतमा भित्रिएका भेडाच्याङ्ग्राको मूल्य घटेको छ । दशैँ सकिएपछि च्याङ्ग्राको मूल्यमा ५० प्रतिशतसम्म कमी आएको छ । मुस्ताङबाट पर्वत भित्र्याइएका च्याङ्ग्रा दशैँमा रू. १४ हजारसम्ममा विक्री भए पनि पूर्णिमाका दिनसम्म आइपुग्दा रू. ७ हजारमा झरेको व्यापारीहरूले बताएका छन् ।
भेडाच्याङ्ग्रा लामो समय पालेर राख्न यहाँको वातावरण सुहाउँदो नभएकाले पछि झनै घाटा हुने डरले व्यापारीहरूले मूल्य घटाएर बेच्न थालेका हुन् । ‘शुरूमा १३ हजारसम्म मूल्य परेको च्याङ्ग्रा अहिले ७ देखि ९ हजार रुपैयाँसम्म दिनुपरेको छ,’ च्याङ्ग्रा व्यापारी गणेश शर्माले भने, ‘अझै दुई/तीन दिन च्याङ्ग्रा नबिक्ने हो भने के हुन्छ, भन्न सकिन्न ।’ उनका अनुसार अझ दुई/तीन दिनपछि च्याङ्ग्राको मूल्य बढ्न पनि सक्छ र घट्न पनि सक्छ । दशैं सकिए पनि तिहार नजिकिँदै आएकाले च्याङ्ग्राको मूल्य बढ्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
तिब्बतको ढोङवासेन जिल्लाबाट मुस्ताङ हुँदै म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ र पोखरातर्फ१० हजारभन्दा बढी च्याङ्ग्रा भित्रिएका थिए । म्याग्दीबाट ट्रकमा राखेर लगिएकाले पोखरामा पनि च्याङ्ग्राको भाउ ह्वात्तै घटेको पर्वत, कुस्माका व्यापारी हरिकुमार श्रेष्ठले बताए । दशैं अगाडि रू. १२ हजारमा विक्री गरेको च्याङ्ग्रा अहिले रू. ७ हजारसम्ममा विक्री गर्दा लाखांै रुपैयाँ घाटा भएको छ । ‘च्याङ्ग्राको मूल्य बढी हुँदा विक्री नभएकाले अहिले घाटा सहेर बेच्नुपरेको छ,’ उनले भने । मूल्य बढेकाले दशैं अगाडि च्याङ्ग्राको साटो स्थानीय जातका बोका र खसी खोजी भएकाले समस्या आएको व्यापारीहरूको भनाइ छ ।
आईएफसीको नगद लाभांश तथा बोनस शेयर
आईएफसी फाइनान्सले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई ८ प्रतिशत बोनस शेयर र ७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । फाइनान्सको आइतवार बसेको बैठकले यस्तो निर्णयगरेको हो । राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा आगामी साधारणसभाले उक्त बोनस शेयर तथा नगद लाभांश पारित गर्ने फाइनान्सले जानकारी दिएको छ ।
फाइनान्सले आव २०६७/६८ मा रू. ५ करोड ४२ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । उक्त नाफाबाट सो बोनस शेयर तथा नगद लाभांश दिने भएको फाइनान्सले उल्लेख गरेको छ । फाइनान्सले उक्त अवधिमा रू. ३ अर्ब ११ करोड ७४ लाख निक्षेप सङ्कलन तथा रू. २ अर्ब ५० करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । आफ्नो सञ्चित कोषमा रू. ९ करोड ४८ लाख रहेको फाइनान्सले बताएको छ ।
सोल्टी सुपर सिक्स क्रिकेट असोज २९ देखि
‘१३ औं सोल्टी क्राउन प्लाजा सुपर सिक्स क्रिकेट टुर्नामेण्ट’ असोज २९ गतेदेखि हुने भएको छ । सोल्टी क्राउन प्लाजाको आयोजनमा ६ दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त प्रतियोगिता त्रिभुवन विश्व विद्यालयको मैदानमा हुने बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
प्रतियोगितामा नेपालका २८ सङ्घसंस्थाको सहभागिता रहनेछ । सहभागी हुने संस्थाहरूमा नेपाल बैङ्क लिमिटेड, सिभिल बैङ्क, नबिल बैङ्क, बैङ्क अफ एशिया, माइक्रोम्याक्सलगायत रहेको सोल्टी क्राउन प्लाजाका महाप्रबन्धक विनी के गुप्ताले जानकारी दिए । सहभागीलाई ७ समूहमा विभाजन गरिएको छ । उक्त प्रतियोगितालाई नबिल बैङ्क, कोकाकोला, क्यान, एण्टीक्विटी काल्सबर्ग, नेपाल एफएमलगायतले प्रायोजन गर्ने भएका छन् ।
बैङ्क अफ एशिया पाँचौं वर्षमा
बैङ्क अफ एशिया नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीति तथा निर्देशनअनुसार चल्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षत्रीले बताएका छन् । बैङ्कको चौथो वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘हामी सरकारको नीतिनियममा रही सबैले रुचाएको बैङ्क हुन चाहन्छौं,’ उनले भने ।
उक्त अवसरमा उनले बैङ्कको वित्तीय अवस्था, योजना तथा उद्देश्यका बारे जानकारी दिएका थिए । रू. ७० लाखबाट शुरू गरिएको बैङ्कको चुक्ता पूँजी अहिले रू. २ अर्ब पुगेको छ । बैङ्कले आर्थिक वर्ष२०६७/६८ मा रू. २० करोड ६६ लाख खुद नाफा गरेको उनले जानकारी दिए । समीक्षा अवधिमा बैङ्कले रू. १३ अर्ब ६७ करोड निक्षेप सङ्कलन तथा रू. ११ अर्ब ७२ करोड कर्जा प्रवाह गरेको थियो । सो अवधिमा बैङ्कको तरलता अनुपात २९ दशमलव ५९ रहेको उनले बताए ।
विसं २०६४ असोज २५ गते स्थापना भएको बैङ्क ‘सँगै प्रगति गरौं’ भन्ने नाराका साथ अघि बढेको बताइएको छ । यसैबीच आफ्नो चौथो वार्षिकोत्सवका अवसरमा बैङ्कले बल्खुस्थित श्री जनविकास माध्यमिक विद्यालयलाई कम्प्युटर तथा प्रिण्टर प्रदान गरेको छ । वार्षिकोत्सवकै अवसरमा बैङ्कले भोलि शुक्रवार प्रधान कार्यालय त्रिपुरेश्वरका साथै आफ्ना सम्पूर्ण शाखामा रक्तदान कार्यक्रम गर्ने भएको छ । आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सहयोग, रक्तदान, पर्यावरण संरक्षणलगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बैङ्कका महाप्रबन्धक लक्ष्मण रिसालले बताए ।
बाल सङ्गठनलाई सनराइजको सहयोग
सनराइज बैङ्क लिमिटेडले आफ्नो चौथो वार्षिकोत्सवको अवसरमा नक्सालस्थित नेपाल बाल सङ्गठनमा रहेका बालबालिकाहरूलाई कम्बल तथा मिठाइ प्रदान गरेको छ । बैङ्कले पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा बुधवार उक्त सहयोग गरेको बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमान प्रधानले जानकारी दिए ।
यसका साथै बैङ्कले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहयोगमा रक्तदान कार्यक्रमको पनि आयोजना गरेको छ । बैङ्कको प्राङ्गणमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा कर्मचारी तथा ग्राहकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको उनले बताए । आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गरिएका यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ ।
बैङ्कले आर्थिक वर्ष२०६७/०६८ मा रू. ३१ करोड सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको छ । साथै, बैङ्कले सञ्चालनको ४८ महीनाको अवधिमा करीब १५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन तथा रू. १२ अर्ब ७५ करोड कर्जा प्रवाह गरेको उनले जानकारी दिए । बैङ्कले हाल आफ्ना ४७ शाखा तथा ५४ एटीएममार्फत १ लाख ८० हजारभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा पुर्याउँदै आएको बताएको छ ।
काष्ठमण्डप बैङ्क पाँचौं वर्षमा
काष्ठमण्डप डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेड स्थापनाको पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैङ्कले चौथो वार्षिकोत्सवको अवसरमा बुधवार न्यूरोडस्थित मुख्य कार्यालय परिसरमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो । त्यस्तै, बैङ्कले वार्षिकोत्सवकै अवसरमा वृद्धाश्रमका लागि खाद्य सामग्रीसमेत वितरण गरेको छ ।
बैङ्कले स्थापनाको ४ वर्षको अवधिमा १८ कार्यालयबाट ग्राहकलाई आधुनिक बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्दै आएको बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रवणकुमार राजभण्डारीले बताए । बैङ्कले आकर्षक ब्याजदरमा ‘मेरो बचत’, ‘इन्ष्टयाण्ट फिक्ष्ड डिपोजिट’लगायतका निक्षेप योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसैगरी विभिन्न शाखाबाट सन्ध्याकालीन सेवा प्रदान गर्दै आएको बैङ्कका सातओटा एटीएम काउण्टर छन् ।